Bogga ugu weyn / blog / Waan ka xumahay, Musqusha ayaa leh dhibaatooyinkan, ma ahan dhibaatooyin xagga tayada ah!
2020 / 12 / 12 Qoondayntablog 13972 0
Guri iibsashadu uma sahlana macaamiil badan, dayactirkuna ma sahlana haba yaraatee, waxayna ku faraxsan yihiin inay soo guuraan! Laakiin qaraabada iyo asxaabta ayaa dhahay sidee ayuu salka musqushaada uga jabayaa cagaha? Waxay ku dhacdaa quruxda, dhib ku ah la macaamilkeeda, waxayna umuuqataa mid aan raaxo lahayn. Marka milkiiluhu aad buu u niyad jabsan yahay, inta badan ee uu ka fikirayo raaxo la'aanta badan, ayaa ka sii cadhaysan. Sidee ayey iigu fududahay inaan lacag aad u badan ku bixiyo dayactirka?
Waqti ka hor, war kale ayaa soo baxay: "150 nooc oo musqulaha TOTO ah ayaa ka dilaacay isla degmada, soo saaraha ayaa sheegay in dhibaatooyin aan tayo lahayn" la sii daayay. Degmo ku taal degmada Chongqing, in ka badan 150 qoys ayaa dildilaacyo ka helay musqulaha TOTO ee u gaarka ah. Qaarkood waa dillaaca haanta biyaha, qaarna waa dillaac salka, iyo xitaa in ka badan, waa saldhiga madaafiicda oo ka soo dhacday gabal weyn.
Xaaladda noocan ah waa inay noqota mid aad u xanuun badan milkiilayaasha. Musqusha waa suuli wanaagsan, sidee bay xaaladdan oo kale u soo muuqan kartaa. Waa inay ahaato dhibaato tayo leh. Marka, kormeer muunad oo kaladuwan, cabashooyin, dhibaatada dukaanka IWM. Sikastaba, lacagta lama waayi karo. Ugu dambeyntiina, tijaabiyeyaashu waxay soobaaraan natiijooyinka baaritaanka waxay muujinayaan: maxaa yeelay degmadu waxay ku taal degmada Chongqing, xilliga qaboobaha waa mid qabow badan, oo ay weheliso bulshada fasaxa ah ee guryaha xilliga qaboobaha ah muddada dheer ee aan la noolayn. Biyaha ku jira gudaha musqusha mudo dheer waxay si fudud ugu horseedayaan baraf, sidaa darteed suuliga wuu barafoobaa oo wuu dildillaacaa, tayada suuliguna isma laha. Mulkiilaha ayaa maqlay natiijadan, “ma ahan mid qalalan, maxaan lacag u keydsadaa, shaqo adag nolosheyda inteeda badan, kaliya waxaan cusbooneysiiyay musqusha, sida loo noqdo sidan! Weli waa in la helaa dhibaatada dukaanka ”.
Macaamiisha, ka dib oo dhan, maahan naqshadeeye xirfadle ah, haanta musqusha oo gaabis ah, saldhigga cagaha dillaac, rakibidda musqusha uma dhowa derbiga, dusha musqusha dusha sare ee midab casaan biyoodka maxalliga ah. Isla markiiba raadso dukaanka musqusha. Musqushaadu dhibaato ayey leedahay! Bixinta, bixinta, bixinta, waxa muhiimka ah ee la yiraahdo seddex jeer. Dhammaan noocyada cabashooyinka ee lagu dalbanayo magdhow! Badanaa, dukaamada alaabada lagu iibiyo ee musqusha sidoo kale aad baa loo qaldaa. Suuli wanaagsan oo guryaha kale ah wax dhib ah malahan. Maxaad dhibaato u leedahay? Kaliya carrab la 'in cuno qadhaadhka!
Dhab ahaan, Taangiga musqusha ayaa gaabis ah inuu buuxiyo, salka cagaha dillaac, musqusha laguma dhejin karo derbiga, dusha sare ee suuliga suuliga ah ee miridhku biyahaa maxalliga ah, musqusha ayaa qaboojiso. Marar badan maahan dhibaatada tayada musqusha!
Mid: taangiga suuliga ayaa aad uga gaabiya buuxinta biyaha
Haddii ay jirto suuliga taangiga suuxdinta biyaha aad ayey u gaabisaa. Marka hore hubi cadaadiska biyaha. Haddii cadaadiska biyuhu aad u yar yahay, waa mushkilad xagga biyo-gelinta ah oo shaqo kuma laha tayada musqusha. Haddii cadaadiska biyuhu caadi yahay, fadlan hubi in tuubbada biyaha ka soo gasho haanta biyaha ay xireen qashin. Haddii ay jiraan, fadlan nadiifi qashinka.
Laba: Ka dib markii musqusha la rakibo in muddo ah, dillaac ayaa ka muuqda cagaha salka, waana sii ballaadhinayaa
Ka dib marka suuliga la rakibo in mudo ah, dildilaaca ayaa ka muuqda cagaha salka, waana sii ballaaranayaa.Tani waxay sabab u tahay rakibida, godka salka waxaa ka buuxa sibidh, tayada suuliguna wax shaqo ah kuma lahan . Sibidhku wuxuu nuugi doonaa biyaha wuuna balaarin doonaa si uu u jajabiyo musqusha Habka saxda ah ee loo rakibo waa: flange loogu talagalay hal musqul Ku kala qaad mashiinka cagtiisa oo go'an, ama silsilad silsiladaysan oo musqusha ah ayaa noqon kara
Saddex: rakibidda musqusha uma dhowaan karto derbiga
Ka dib marka suuliga lagu rakibo derbiga oo aan u dhoweyn xulashada masaafada dheecaanka musqusha iyo masaafada dhuumaha bullaacadaha oo laga ilaaliyo gidaarka, tayada suuliguna shaqo kuma laha. Masaafada dheecaanka ee dheecaanka musqusha tilmaamaha guud waa 210mm, 305mm, 400mm saddex tilmaamood. Xaaladaha caadiga ah awgood u oggolow cabbirka rakibidda ee 190-210mm, 285-305mm, 380-400mm, taasi waa in la yiraahdo, dhabarka musqusha, laga soo bilaabo bannaanka bannaanka 20mm.
Isticmaalayaasha waa inay doortaan qeexitaanka musqusha iyadoo loo eegayo masaafada dhabta ah ee ka fog darbiga tuubbada dheecaanka ee guriga ku jirta iyo cabbirka rakibidda ee la oggol yahay markay wax iibsanayaan. Haddii masaafada tuubbada bullaacadda ee derbiga la dejiyo oo aan la isku dheelitirin, ma jiro xulasho masaafada masaafada dheecaanku ka kooban yahay, waxaad iibsan kartaa 1 wareeg kale oo aad ku hagaajiso. Shifter wuxuu guud ahaan kordhin karaa ama yareyn karaa bartamaha masaafada ugu badan ee qiyaastii ah 100mm.
Afar: musqusha oo dhaq dushiisa biyaha maxalliga ah oo jaale noqda
Musqusha waxay isticmaashaa waqti dheer, fududahay in la muujiyo musqusha dushiisa oo ah ifafaale hurdi biyo ah oo maxalli ah. Musqusha oo lagu dhaqo dusha miridhkeeda miridhkiisa biyaha maxalliga ah, ayaa aad u saameeya quruxda, isticmaalka sidoo kale waa mid aan fiicnayn, nadiifin iyo daal. Xaaladdan oo kale milkiilayaashu waxay badanaa u maleynayaan in musqusha ay dhibaato tahay, runtiina, tayada biyaha, iyo tayada musqusha midna lama xiriiro. Tayada biyaha awgood, musqusha waxay noqon doontaa wasakh jaalle ah oo dusha sare ah ka dib waqti dheer oo la istcimaalay. Waqtigaan, waxaad u isticmaali kartaa nadiifiyaha inaad xoqdo, ka dibna biyo ku maydh.
Shan: dildilaaca qaboojinta musqusha
Musqusha musqusha ama sump dildilaaca, ama saxanka dhulka oo dhan hoos u dhaco, waxaa laga yaabaa inay la xiriiraan arrimo deegaanka. Tusaale ahaan, jiilaalku waa mid aad u qabow, heerkulka gudaha ayaa ka hooseeya 0 darajo, biyaha ku kaydsan taangiga musqusha ayaa barafooba. Muga barafka ayaa laga yaabaa inuu ku fido ilaa heer uu kor u kaco haanta biyaha dillaacsan. Haddii milkiiluhu uusan isticmaalin suuliga muddo dheer, biyaha haanta ma qulqulayaan muddo dheer, barafkuna wuxuu si fudud u sababi doonaa taangiga.
Inta lagu gudajiro isticmaalka suuliga, waxaa jira ifafaalo kala duwan, welwelka milkiilaha waa la fahmi karaa. Si kastaba ha noqotee, milkiilayaasha badankood waxay si adag u shaqeeyeen nus nus noloshiisa gurigan. Laakiin marar badan taangiga musqusha ayaa gaabis ah in la buuxiyo, dildilaaca cagaha salka, musqusha lagu rakibo derbiga, musqusha oo lagu dhaqo dusha sare ee miridhka biyaha deegaanka, dilaaca suuliga musqusha, maxaa yeelay rakibidu sax maahan, adeegsi aan habooneyn , iyo tayada musqusha xiriir lama leh. Musqusha si qalad ah ayaa loogu eedeeyaa. Markan iibiyaha dukaanka musqusha wuxuu u baahan yahay dulqaad si uu uga caawiyo milkiilaha inuu helo dhibaatada dhabta ah, tan ugu wanaagsan ee ka caawisa milkiilaha si wadajir ah si loo xaliyo dhibaatada. Haddii macaamiisha aysan wali caddeyn, waad dhigi kartaa ururinta WeChat. Diyaar u ah inaad u gudbiso macaamiisha si looga fogaado is faham la'aan aan loo baahnayn!
Dhibaatooyinka badeecada, kulligeen ma dooneyno. Ganacsatadu waxay u baahan yihiin inay hayaan maskaxda si wanaagsan ugu adeegida macaamiisha si ay ula tacaalaan dhibaatooyinka iyaga haysta, macaamiisha sidoo kale waxay u baahan yihiin inay qalbi dulqaad leh u hayaan ganacsatada, ka dib dhan, sumcadda wanaagsan ee macaamiisha ayaa ah waxa ay ganacsatada doonayaan.
Hore:: Ka Dib Markii Aan Ku Arkay Naqshadda Labiska Labaad Ee Qof Kale Gurigiisa, Waan Xanaaqay! Next: Musqulaha Waa La Dayactiri Karaa !!! Musqusha Dadku Way Ogaan Doonaan